पर्सि देखि फेरि बन्द : सही की गलत ? – Life Nepali
पर्सि देखि फेरि बन्द : सही की गलत ?काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्माट्र निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। तर यो संगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जान थालेको छ । यो अवस्थामा अब काठमाडौमा जारी रहेको निषेधाज्ञा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ । ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
प्रजिअ निरौलाले भने, ‘कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा हुन सक्छ। हालसम्म प्रशासनले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। हामी असारको ३०र३१ गते बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं।’ ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Previous किन एकाएक फेरीए भिम रावल ? माधव नेपालको कदम गलत भन्दै ओलीलाई भेट्न पुगे वालुवाटार
Next अदालतको आदेश मान्दिन रे, के तिम्रो “बा” को शासन हो र ? रबि लामिछाने